Waxaynu ka baranay Maxamuud Xaashi Cabdi & 7 Sano. | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waxaynu ka baranay Maxamuud Xaashi Cabdi & 7 Sano.
Maxamuud Xaashi wuxu dhashay hillaadii 1964 kii Gobolka Togdheer, Aaabihii wuxuu ahaan jirey Ciidamaddi Ingiriiska, wuxuu u weynaa sida lasheegay laba bahood oo Xaashi Cabdi mid kamida, Wuxuu ka baxay dugsiga sarre ee Sh. Bashiir, Wuxuu ku biiray SNM markii xaaladda noloshu ku adkkaatay halkaas oo walaalkii Cali Xaashi ka mid ahaa saraakishii SNM. sida lasheego wuxuu ku noqday Dawladii Siyaad Barre, markuu xamili waayey duruuufihii dhibaatadii Jabhadnimo, dagaalkii 1988 ayuu dhoqoshey ka noqday xoghayaha dhaqaalaha SNM ee aaga 1aad illaa xorayntii waddanka oo uu noqday Maayorkii ugu horeeyey ee Magaalada Burco, ka dibna shirkii Boorame ayuu ka mid noqday xil dhibaanadii hab beleedka lagu soo doortay. Maxamuud wuxuu ku shaqayn jirey siyaasadda Saleebaan Maxamuud Adaan, waxaanu ahaa afhayeen dhaliila Maamulkii Madaxweyne Cigaal. wuxuu ka mid noqday xisbiga Kulmiye, Doorashii ugu horeysey ee Madaxweynaha ayuu Mr. Xaashi ka tahriibay isga iyo Xaaskiisu jamhuuriyadda Soomaliland waxaanu Reerkisii ku furay Magaaladda Berhmingham halkaas oo ku qaadanayey Jobseekers allowance, waxaanu soo doogsin raacay Guushii Kulmiye ee 2010 isagaa doorashada 3 billood ka hor dalka ku soo laabtay. Wuxuu ku soo baxay golihii Wasiiradda khaasatan duulista hawada. Wax wax barasho ah oo uu ku bartay Britain majirto.
Waxaynu odhan karnaa Waa Khaayimiintii ama Maafiyaddii Aragagixisada Boobka Qarranka Ee Xididada u siibay Distuurka, iyo Shuruucdii Qarrankani lahaa, Waa hogaankii xaqul qalinka iyo Murdisooyinka.. Waa Shakhsiga Cimraha tagga isagoo Guri xaraana iyo Cunto xaraana iyo Dhar xaraana gashan sanadkii 3 Jeer.. Dadku maah kii hee intay Daaf ka guuraan Daacuun u rogan jirey/.